Tselatra · Janoary, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Tselatra · Janoary, 2017
Tantara tamin'ny Tselatra tamin'ny Janoary, 2017
Fony izy mbola tany amin'ny akaninjaza dia efa fantatr‘ireo ray sy reniny fa manana talenta vitsy mpanana i Viktoriya Yermolyeva. Tamin'ny fanekena ny talenta safatsiroa nananany sy ny fahafehezany ny piano, nosoratan-dry zareo hanaraka fianarana manokana izy mba hahazo fiofanana ho mpitendry klasika ary nampandrisin'izy ireo anjara taminà fifaninanana sy kaonseritra tsy tambo ho isaina.
Saingy rehefa nandeha ny fotoana, niova ny fitiavan'ilay mpitendry piano teraka tao Kiev; na teo aza ny nahazoany loka marobe taminà fifaninanana piano tamin'ny sehatra iraisampirenena, ny filalaovana irery tany amin'ireo efitrano faran'izay malaza tao Eoropa Atsinanana, ary ny fiofanana niaraka tamin'ny sasany amin'ireo anarana goavan'ny mozika klasika amin'izao fotoana, nanapaka hevitra i Yermolyeva fa tiany ny hilalao karazana gadona mozika iray hafa: rock.
Raha sady mbola miakatra sehatra amin'ny maha mpitendry piano klasika azy, tamin'ny 2007, nanokatra kaonty iray tao amin'ny Youtube izy nandefasany ireo lahatsary ahitàna ny fandrindràna mozika mavesatra nataony (rock metal)— tamin'ny fampiasàna azy io ho karazana fisindàna amin'ireo tahiry klasikany. Vetivety foana ny “VKgoeswild,” ny alter ego an'i Yermolyeva, dia nisidina ambony, niaraka tamin'ny filalaovany ny “Toxicity” an'ny System of A Down sy ny “Sweet Child o’ Mine” an'ny Guns N’ Roses , ny “Bohemian Rhapsody” an'i Queen's ary hira maro hafa efa samy nahazo mpijery an-tapitrisany avy.
Na efa ho ampolo taona lasa aza no nanokafany ny kaontiny voalohany, tohizan'i Yermolyeva ny famoahana tsy tapaka ireo filalavaony hiran'olona, ary manana mpanaraka efa ho antsasaka tapitrisa amin'izao fotoana izao ao amin'ny YouTube. Mampakatra ny naoty narindrany ho ao amin'ny tranonkala FlowKey ity mpiangaly rock 39 taona ity ; Azo trohana ihany koa amin'ny sandany mora izy ireny —fandrindràna maherin'ny 300 ny fitambarany.
Tato ho ato, lalaovin'i Yermolyeva eny an'arabe ny hirany rock, matetika miaraka amin'ny amponga, eny amin'ireo lalambe mamakivaky an'i Eoropa.
Mpanoratra RuNet Echo Nandika Candy